सीतारामको प्रेमकथा | Hamro Patro
प्रेमलाई पर्दाम राखेर सर्मपण लाई उजागर गरेको ईतिहासले सीताराम को प्रेम कथालाई न्याय भनें दिन नसकेकै हो ।
एउटा पुजारीले कुनै महिलालाई आशिष दिनु परेमा सर्वप्रथम एउटा आशिष दिन्छ, सीता झैं हुनु । सीता नारीको त्यो उच्चतम बिन्दु हो जसको जिवनका हरेक घटनाक्रममा हजारौं पानाको ज्ञान र दृष्टान्त लुकेको छ । स्वामी बिवेकानन्दले प्रस्टसंग भनेका छन् कि यदि भक्त हुन्छन भने ति सीता जस्तो हुन पर्दछ किनभने रामको भन्दा उच्चतम भक्ति र सर्मपण सीतामा पाइन्छ । आज रामनवमीमा राम र सीताको प्रेम प्रसंग कोट्याउन चाहें, राम र सीता भन्ने बित्तिकै हामी वनवास, कठिन, दुख्खद अनि असमान जिवनको परिकल्पना गर्दछौं जुन बिल्कुलै गलत हो । रोमान्टीसीज्मको अनुपम पृष्ठहरु भएको रामायणको सामसीता प्रेम प्रसंग थोरै उजागर गर्न जाँदैछु ।
बिवाह त केवल प्रेमको पुरक मात्र हो, सीताराम कथामा ।
हजारौं बर्ष अघि देखि नै हाम्रो समाजले प्रेमका बारेमा अध्ययन गरेको छैन्, अन्वेषण गरेको छैन् । प्रेमलाई पर्दाम राखेर सर्मपण लाई उजागर गरेको ईतिहासले सीताराम को प्रेम कथालाई न्याय भनें दिन नसकेकै हो । प्रेम भन्दा पनि बिवाह जोडीका रुपमा राम अनि सीतालाई उदहारण दिइन्छ, यस प्रेमलाई आज मैले जानेसम्म उजागर गर्नेछु भन्ने जर्मको छ ।
थाईल्याण्डको फायाप बिश्वबिधालयका अन्र्तधार्मिक परिषदका सदस्य गुरुहरु ले अन्र्तधार्मिक भेटघाट कार्यक्रममा नेपालवाट मलाई बोलाइयो । सन् २०१५ को कुरा हो, भारतीय कृष्णभक्त गुरु संग मेरो सीतारामको प्रेम बिषयमा अबेर सम्म बार्ता भयो ।उन्को तर्क अड्कियो, यदि राम प्रेमी हुन र सीतासंग उनको मायाको गुणमा दोष आएको थिएन भनें किन गर्भवती सीतालाई एकजना प्रजाको अप्रत्यक्ष दोषरोपणका आधारमा जगंल पठाए भन्ने बिन्दुमा । मैले आफ्नो तर्क राखें, शायद उनले बुझे होलान् भन्ने अपेक्षा अझै छ । प्रेमको बिम्बलाई बलिदानको आधारमा शुद्ध पार्ने जर्मकोका रुपमा बुझाउने प्रयास मेरो सधैं रहेको छ । राम सीतासंग यति चोखो प्रेम गर्दथे कि त्यस प्रेमको आक्षेप मेटाउन प्रेमीका लाई समेत जगंल पठाउन उनि तैयार भए । अहिलेको सांसाररिक परिवेशमा यस प्रेमको गहिराई बुझ्न गाह्रो छ किनभनें अहिले धेरै धारणाहरु मिलन, आशक्ति अनि नाफाघाटाको तराजुमा राखेर मात्र तौलिइन्छ । त्यस जोखाई माथी सीतारामको पिरतीले अझै पनि उत्सर्ग प्राप्त गरेको छ । अनि अर्को तर्फ सीताले पनि रामसंग यति चोखो पिरती गरेकी छिन कि रामका हरेक बचनलाई बिना कुनै संकोच उनी पालना गर्दछिन् । रामको एकबचन लाई शिरोधार्य गरेर जगंल पस्न सक्ने गर्भवती सीता र राम बिचको प्रेम अनि मर्यादाले निम्त्याएको बिछोड लाई संसारले बुझेर आत्मसाथ गर्न जरुरी छ । प्रेमको अन्त्य मिलन मात्र नभई बिछोड या बलिदान पनि हो, बुझ्न जरुरी छ । हरेक बर्षको बिवाहपञ्चमीले पनि हामीलाई यसै कुरा सम्झाएर जाने गर्दछ ।
रामायण पढ्ने हरेक पाठकले आखिर किन भनेंर थकथक मान्ने गर्दछन् अन्त्यमा आएर । आखिर किन ? सीता छुटिन पर्यो सबैको प्रश्न छ । तर सीता नै मात्र ति एक चरित्र हुन जसले रामायण वरिपरि कहिँकतै रामको निर्णय बिरुद्ध या असहमतीमा प्रश्न या दुबिधा उठाउदिनन् । उन्को यो भाव, सम्मान अनि सहमती के प्रेम हैन ? रामले सीतालाई जगंलमा पठाए किनभनें त्यो सीता गएकी हैनन बरु रामको आफ्नै अशं पनि उनीसंगै गएको हो, पीडा दुबैतर्फ नै हुन्छ नि माया मा । दशरथ राजाले छोरालाई बनवास जाउ भनेर अकस्मात भन्दा पनि बुहारी सीता ले बिना कुनै प्रश्न जगंल गइन्, रामको मर्यादा र निर्णयलाई सीताले सदैव आत्मसाथ र सम्मान गरेको पाइन्छ ।
कहिँ कतै नारीवादी कोणवाट भनें सीतालाई निरिह पनि नपाइएको हैन तथापि रामले सीतालाई गरेको सम्मान, स्नेह अनि सम्बोधनले घरि घरि सीताको रामको हृदयमा भएको बिराज वासको याद दिलाँउछ ।
न त राम न त सीता ? दुबैको मनमा अर्को नारी या पुरुषको धारणा आएको छैन् । यो केवल प्रेममा मात्र हुन्छ । सीता राम बिवाह त केवल प्रेमको पुरक मात्र हो, यि जोडी प्रेमको प्रभुत्व श्रेणीमा पर्दछन् । सीताको अग्निपरीक्षाका खण्डहरु अर्थात रामायणको उत्तराखण्ड पछि आएर श्रुती अनि स्मृतीका आधारमा जोडिएका तर्क पनि छन् । श्रुती भनेंको सुनेका आधारमा र स्मृती भनेको सम्झनाका आधारमा । यी कुराहरु अन्य खण्डहरु झैं यर्थाथ नहुन पनि सक्छन् र भएमा पनि केही थपघट भएको पनि हुन सक्छ । एउटा कुरा भनें अकाट्य छ, सीताको पतीव्रताको आधार मापनका निमित्त रामले गरेको बलिदान ले गर्दा हजारौं बर्षपछि पनि ठूलो असर छ । अहिले सम्म पनि एकनारी र एक पुरुषको प्रेमसमबन्ध र बफादारिता स्थापित गराएको छ ।बढ्दो समबन्धबिच्चछेद अनि लैगिंक असमानताको यो यूगमा सीतारामको प्रेम प्रसंगले लैगिंक समानता र सहिष्णुताको उदहारण दिएर गएको छ ।पतीव्रता र पत्नीव्रता दुबैतर्फ को यो बफादारिता पनि सीतारामको प्रेमले संसारलाई सिकाएको हो, सीताराम अमर रहुन ।